प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै कुरा लत्याएर संसद विघटन गरे : भीम रावल — Jana Garjan
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै कुरा लत्याएर संसद विघटन गरे : भीम रावल
कैलाली । शुक्रबार नेकपा (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल समूह)को सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावलले सहिदका रगतको अपमान गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने कुचेस्टा गर्नेलाई जनताले बढारेर लग्ने बताएका छन् । उनले जनताको अगाडि हिजोको निरंकुश शासन टिक्न नसकेको बताए ।
उनले संविधानको रक्षा र देशको राष्ट्रियता स्वाधिनताको रक्षाका लागि सदैब तत्पर रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
कसैले लोकतन्त्रका मुल्य मान्यता मिच्छ भने जनता टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनले बताए । ‘हामी त उहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउन सक्थेयौँ, तर ल्याएनौँ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक निकायले कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ। मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, बहुमतको कदर गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै कुरा लत्याएर संसद विघटन गरेपछि अब जनता जागिसकेको उनको भनाइ छ । जनताको अगाडि कसैको पनि केहि नचल्ने रावलले बताए ।
एउटै नम्बरका दुई वटा मोटरसाइकल, खोजीकार्य तीब्र पार्दै ट्राफिक प्रहरी
प्रचण्डको बीउ उम्रिदैन, नेकपाको हाइब्रिड नै आवश्यक छ : घनश्याम भुसाल
प्रचण्डले रोपेको बीउ कहिले फुल्छ ?
हेटौंडाबाट अनलाइन जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ११ जना पक्राउ